Amagama imifanekiso nezithombe. ukubaluleka imifanekiso
imifanekiso-Orthodox, amagama abo kanye nenani - isici esibalulekile ekutadisheni Isayensi yobuKristu. ikhaya banoma yimuphi umKristu kunzima kakhulu ukucabanga ngaphandle ezihlukahlukene imifanekiso, ngamunye ephethe ukubaluleka lalo. Njengoba umlando wenkolo, abaningi kubo baba ngamakholwa eyaziwa emakhulwini amaningi eminyaka adlule. Izinkolelo ezingokwenkolo zabantu kakade engimbumbile isikhathi eside kakhulu, kodwa uphawu lokhu akusho ulahlekelwe anencazelo ekhethekile zamasiko nezomlando sebandla amasonto amaningi namathempeli. imifanekiso-Orthodox, izithombe kanye namagama kubo zidlala indima ebalulekile ukuphiliswa komphefumulo womuntu futhi isilinganiselo yayo kuJehova.
Kukholakala ukuthi bonke abakuKristu ungakwazi bengabonakali ukusiza ngisho isimo iningi esasibonakala njengomnyama ongenafu. Ukuze ezinye Saints kufanele bafune usizo nanoma yimuphi nesimo esingathi sína. Amagama imifanekiso-Orthodox kanye namanani azo ayobe okwethulwa kulesi sihloko. Ngaphezu izincazelo kanye izindaba mayelana izakhiwo ngokuyisimangaliso isithombe ngasinye Uzonikezwa ohlonishwayo kakhulu nezithombe zazo.
Kulesi sihloko uzokutshela nanzuzoni imelelwa icon ngamunye, kanye nemithetho womthandazo nezimangaliso ungakha ethize ubuso ongcwele. Sekwenzeka ukuthi amagama imifanekiso ngezithombe kakade aqukethe ulwazi mayelana nanoma yisiphi nguye izinkathazo ungagcina isithombe. isithonjana ngasinye ezichazwe esigabeni izonikezwa endaweni ekhethekile. Igunya enkulu kubazalwane kokubili eRussia futhi emhlabeni wonke, kuyinto isithonjana UnguNina KaNkulunkulu, eyabhalwa futhi isikhathi eside zigcinwa ezindongeni Kazan amathempeli edolobheni. Lolu phawu grand futhi omkhulu ubhekwa umvikeli eyinhloko abantu bezwe lakithi. Noma yimuphi iholide okuphawulekayo ekuphileni kwabantu Russian Awukwazi ukwenza ngaphandle yokukhulekela okuyisiko ngale ndlela, kungakhathaliseki ukuthi wabhapathizwa noma engcwele wedding emcimbini izinhliziyo ngothando.
Ngezansi uzobe kuchazwe ohlonishwayo imifanekiso Virgin. Photo negama, nokubaluleka kwabo uzophinde kudalulwe.
Kuyaziwa ukuthi Kazan Isithonjana UnguNina KaNkulunkulu kusiza amakholwa ukuqokomisa ngokushesha sithole injabulo yomkhaya, uye eside zaziwa imibhangqwana ukuba unqobe sokungahoshelani ebuhlotsheni futhi siphile bajabule kakhudlwana. Njengoba livikela umkhaya, wakhe kunoma iyiphi ekhaya wenza hang eduze ohlakeni ngoba umntwana ngaphansi ikhava nokuvikelwa leNkosi.
Ukuze uzulazule masinyane, ngalokho isithombe Our Lady ukuthandaza esimweni esithile, kungcono bafunde amagama izithonjana Virgin. Ekhuluma isithonjana Our Lady of Vladimir, kuhle ukuthi uzinake wena kangangokuba ngokwezibalo kubhekwa njengento engekho ngaphansi ohlonishwayo phakathi izakhamuzi eziningi zenkolo. Kunobufakazi bokuthi le isithonjana wokugcotshwa amakhosi umvuzo ezinethonya kunazo eMbusweni Russian. Lolu phawu kungenziwa kokuthandaza ngale indlela abe enomusa, kabanzi mayelana nokuthi ukuthola umndeni bese qeda kusukela izifo ezingathi sína, kanye nendlela ukwenza ukuthula nalabo kwakukhona ezingqubuzana kakhulu. Futhi, umfanekiso ongabonakali ivikela kusukela ngamashwa nosizi zomama nezingane nasezimweni ezinzima. Phezu kwakho konke, lokhu isithonjana kusiza ukungazali nakwezinye iziyaluyalu kwezitho zokuzala, kanye abesifazane abakhulelwe nabancelisayo. Lona isithonjana ethandwa kakhulu of the Virgin. Izithombe kanye namagama amanye izithombe nayo izofakwa okwethulwa kulesi sihloko.
Njengoba siye saba sobala kusukela incazelo ngisho lezi imifanekiso emibili cishe amandla onke the Virgin, Nokho, njengabanye imifanekiso eminingi leSonto Lobu-Orthodox. Yingakho-ke kubalulekile ukuba nelinye ikholwa kobana ukwazi izithonjana Virgin oNgcwele amagama. Wonke amaKristu kudingeka azi okungenani amanye amaqiniso mayelana nencazelo izithombe ezithile, kanye olunye ulwazi mayelana nokuphila saint Orthodox.
Kuyaziwa ukuthi uJehova uyabalalela labo abamlandelayo, abagcina yonke imithetho yenkolo nezingokomoya. Ukuthembela KuNkulunkulu futhi bajabule. Ngezansi kukhona imifanekiso ohlonishwa kakhulu UnguNina KaNkulunkulu, igama kanye nenombolo ngamunye wabo.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Inenzuzo esibhakabhakeni"
Lolu phawu ngokuyisimangaliso lifundisani ngomthandazo ukuze ubuyele sisendleleni efanele, nokuthi abantu oshonile kwelizayo bekuthulekile ezinhle. Dumisani isithonjana 6 Mashi lendzala, kwathi ngo-March 19 isitayela esisha.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Bekhathazekile ngokuthi bangazixazulula kanjani ithemba olulodwa"
Ezinye amagama imifanekiso, ungakwazi bayaqabukela bezwe lisetshenziswa isonto, kodwa akusho wawubaphuca amandla. Naphezu kweqiniso lokuthi kufakazela udumo eliphansi lesi sithombe, eSontweni Lobu-Orthodox akathist ngisho zikhona ukuze alale naye. Ukuthandaza ngaphambi kokuba lokhu isithonjana angashintsha ukucindezeleka, ukuwohloka okungokomoya futhi usizi. Labo kholwa ngaphoxeka futhi aphelelwe umoya zaphezulu, thandaza uMninimandla onke ukuthi perk, uthethelele kanye nokukhulula izaphulamthetho kanye bakwemukele nesitha. Ngaphezu kwalokho, isithonjana sithandazela ukukhululwa umona nokubuyisana ezilwayo abantu, kuhlanganise nomakhelwane.
ukuluthwa Modern (ukugembula, ukuluthwa izidakamizwa eziyingozi, ukusebenzisa uphuzo ngokweqile, ukubhema, ukuluthwa ikhompyutha) angaphansi ukuphulukiswa lapho ebhekisela ezinhlekeleleni umfanekiso Our Lady.
Bogolyubovo isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
Lolu phawu kusiza ukuphulukiswa isifo, ikholera, isifo kanye nezinye izifo ezingathi sína kwababhemayo. Uhlonishwa uNina kaNkulunkulu ngesimo noma 18 noma 1 Juni.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "ababhubhayo"
Lokhu abadumile isithonjana Khulekani angawokuphulukisa izinyo kanye bekhanda, izinkinga umbono, imfiva kanye sokuwa, inhlalakahle umshado, ukubuyela inhliziyo nokholo eNkosini, kanye esinzima kakhulu, cishe ezingelapheki ebuntwaneni izifo. Ngaphezu kwalokho, isithonjana efanayo iyadingeka mayelana nokwelashwa umlutha wotshwala. Usuku izinsuku 18 yokudumisa noma 5 Februwari.
Isithonjana Our Lady of Vladimir
Lolu phawu Waziwa kakhulu iqiniso ukuthi okwakukhona ezinsukwini Russia lasendulo yagcotshwa Amakhosi ephakeme kakhulu amakhosi. It is eyaziwa ukuthi ukubamba iqhaza kulesi sithombe lwenziwe ukhetho wabaBishobhi. Lokhu Khulekani isithonjana yibani nomusa kakhudlwana, nendlela alulame ezifweni ezimbi kakhulu, saxosha amademoni kusuka emzimbeni. Omama izingane zabo ezincane bangathembela lokuvikeleka kwezifiso ezisemqoka ezingumphumela Virgin ngale ndlela ngokugcwele, futhi labo balinde nje ukubukeka ingane, ubuso ikunika ukulethwa lula futhi impilo nosana. abesifazane nenzalo angaya isithonjana nesicelo ukunika izingane eside elindelwe.
UVladimir neKazan UnguNina KaNkulunkulu - izithonjana wayemthanda kakhulu Virgin. Izithombe amagama alaba amathempelana ingatholakala emizini yabantu ngisho hhayi zenzisa kakhulu.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Zonke Ohluphekayo"
Ngezinye izikhathi icons amagama ukuthi babeshaye esikhonkosini. Lolu phawu ivamile phakathi kwalabo ababa kuyicala eqinile, ukuhlupheka nokuquleka ezinzima kanye nezifo zokuphefumula, iziguli isifo sofuba. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuba bathandazele ukuphulukiswa izandla kumuntu ogulayo sika. Gubha usuku lokuzalwa imifanekiso party 6 noma 24 Okthoba.
Ziningi kakhulu ezingavamile, kodwa uphawu esinamandla kakhulu UnguNina KaNkulunkulu, ngesithombe amagama ozokwethulwa ngezansi.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Vsetsaritsa" kusiza kulabo abaphethwe umdlavuza futhi idluliselwe eziningi izifundo ngamakhemikhali nemisebe eyingozi.
Isithonjana Our Lady of Georgia
Lolu phawu imithandazo yabo onalesi sifo, imfiva, izilonda, ubumpumputhe, ukungakhuli kokuzwa. Igama Day ukugubha isithombe ezingcwele 6 noma 22 Agasti.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Ibusa"
Lolu phawu uthandazele ukuzinza of ubudlelwano kuleli zwe, ubulungisa, mayelana nokuthola injabulo enhliziyweni, ukuntuleka ubuzenzisi uthando. Lolu suku lugujwa imifanekiso 15 noma Mashi 2.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "ubizwa ukuhlangabezana ngempela"
Lesi sithombe se-Umama oNgcwele kaNkulunkulu athandaze kukhona izici okunzima umzimba nomphefumulo, kanye ngemva kokuba kwaqeda noma ikuphi ndaba ebalulekile. Igama usuku izithonjana imakwe 11 noma 23 Juni.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Spring Okuphila"
Lesi sithombe ukumphakamisa imithandazo yabo labo abahluphekayo ngezinye izifo samanje ezibucayi umphefumulo nomzimba, kanye nalabo abakhathazeka ngokweqile ngokubukeka yobuthakathaka. Amakholwa eqiniso lapho ebhekisela ezinhlekeleleni lokhu isithonjana emangalisayo ukwamukela ukuphulukiswa ephelele isikhathi esingenasiphelo. Qamba Day isithonjana "olunikeza ukuphila Spring" lugujwa usuku sedmits elikhanyayo.
Isithonjana Our Lady of "The Omen"
Lesi sithombe ongcwele turning umthandazo ngokumelene ikholera, ukungakhuli nezinye izifo ezifanayo. Igama Day ukugubha lolu uphawu wenza 8 noma 21 Septhemba.
"Iver" isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
Igama Day lugujwa ngoLwesibili leviki Bright, futhi kuyasiza ngomlilo eqinile, kanye nezinkinga ezihlukahlukene futhi uma induduzo edingekayo ekuhluphekeni engqondo. Usuku inkumbulo 12 noma 25 Februwari.
EJerusalema Isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
izakhamuzi Orthodox wamisa akhokhe imithandazo yabo ngalesi isithonjana ukufa mass imfuyo, ngesifo, ikholera, kanye khona yobumpumputhe nezinkinga of the system zemisipha. Ixhumana iningi amacala uqinisekisa alulame ngokugcwele.
Ilyinsko -Chernigovskaya isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
Lolu phawu, wanika izakhiwo ngokuyisimangaliso, thandaza nge ukukhubazeka eqinile, ingxibongo emva kokutheleleka, izifo zezinyawo, ngokushaya esolwa "amabutho ezimbi" futhi bavikelekile ngokufa okuzumayo. izinsuku lodumo memory icon 16 noma 29 Mashi.
Kazan Isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
Kazan Isithonjana UnguNina KaNkulunkulu ethandaza ezimweni lapho ingozi ayehlasela bakwamanye amazwe, kanye ukubuya kwabantu abayizimpumputhe kanye entry yimpumelelo ku-Union of Nkulunkulu abathanda nomunye. Ngaphezu kwalokho, lokhu umthandazo usisiza ukuba basinde lapho yinhlekelele ethile. Igama Day isithonjana uthi 8.21 Juni futhi Okthoba 4 nezinombolo 22.
Kaluga Isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
Beguqile bethandaza ngale ndlela labo abanezifo abalulekile ukuzwa, kanye nezinye izifo ezifanayo. Igama Day le isithonjana amanothi 2 kanye 15 Septhemba.
"Kozelschanskaya" isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
isikhalazo ngomthandazo lokhu, isithonjana emangalisayo anikeza ukuphila kuwusizo ekulimaleni kwamalungu omzimba, ukulimala kabi kanye oluzayo ukungenelela okukhulu kuhlinzwa. Qamba ngale isithonjana Virgin amanothi 6 futhi 21 Februwari.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Milkgiver"
Lokhu kukhulekela saphezulu ubuso njengenjwayelo, omama, abesifazane abakhulelwe nabancelisayo. Memorial Day, lokhu isithonjana ugubha 12 no-25 Januwari.
"Muromskaya" isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
Ngaphambi lokhu isithonjana ngokubabazekayo nikhuleke igama ehlonipha, ngokunqoba iqiniso, ukuvuselelwa nesihawu e ezinhliziyweni zabantu, mayelana nokuthola umzimba wenyama okunempilo kanye ingqondo, ngokulondoloza ukholo lobuKristu kulo lonke leli zwe. Ukukhazinyuliswa isithonjana kanye negama-Ukuphuma kwalo 12 no-25 Ephreli.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Burning Bush"
Lolu phawu iNcasakazi eCwebileyo yakhelwe ukuletha ngempela ethandaza abantu bakhe kusuka imililo, izikhukhula kanye nezinye nokucekela phansi impahla. Memorial Day lugujwa 4 no-17 Septhemba unyaka ngamunye.
UNina kaNkulunkulu "umbala fadeless" isithonjana
Isithonjana kuyasiza ukuhlala endleleni efanele yokuphila, alondoloze PILO kubantu abanesizungu sokholo sisisiza ukuthola uthando lweqiniso. Lamkhulekela ngesineke ngaphambi lesi sithombe futhi ngicela usizo kanye nezeluleko, ungakwazi ukuxazulula, njengenye yezinkinga ezinzima kakhulu ekuphileni komkhaya futhi ubuhlobo phakathi abashadayo. Ngaphezu kwalokho, isithonjana kusiza ngokushesha ngangokunokwenzeka okuphulukisa amakholwa nezibi. Memorial Day lugujwa 3 no-16 Ephreli.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Injabulo Okungalindelekile"
Lolu phawu ngokuvamile kuwufanele emgqeni yezithulu nokuzwa abantu kahle. Qamba Day imifanekiso - 9 futhi 22 Disemba.
Lolu phawu ukuthandaza zonke izoni, kanye, abanethemba turning nomndeni abadlala, imilutha yezidakamizwa notshwala. Lolu phawu kudinga imfundo isihe nomusa, kanye nomuzwa injabulo usuku ngalunye. Ethi isithombe ufundeka kanje: "Kubo bonke labo abacela ngokholo uzonikezwa!".
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Injabulo ne-Consolation"
Lolu phawu ukumphakamisa imithandazo yabo kulabo ukululama kusukela izifo ezimbi kakhulu. Igama Day kugujwa 21 noma ngo-January 3.
Isithonjana Blessed Virgin "Usizo ebeletha"
Kusukela esikhathini eside esidlule, lapho sifikelwa ubuhlungu olunzima lapho ebeletha, lapho ukufa usondelene kakhulu, abesifazane iphendukele umthandazo ikakhulukazi sentshiseko uMsindisi Ubusisiwe, Umama wakhe. Imindeni zenzisa futhi esikhathini sethu asikwazi ukubona isithonjana of the Virgin Mary, ngokuthi "Usizo ebeletha." Lolu phawu emangalisayo futhi evundile kakhulu UnguNina KaNkulunkulu ukuthandazela bonke abesifazane abakhulelwe abafuna awunankinga uyazithola izingane enempilo.
isithonjana Pochaev we Umama
Lokhu okuyisimanga ngempela isithonjana Khulekani nokuvimbela ngezimpi ezidabula ka obereganii kusukela esontweni ahlukahlukene, ukuvikelwa ayehlasela zezinye izizwe nangezindebe abangabazi phezu nokuVikelwa ubumpumputhe okungokomoya nokungokwenyama. 23 Izinsuku kwenhlonipho 5 Julayi.
Isithonjana "Ukwelekelela labo abadla Esincane"
Lokhu kuhloswe ukuvikela isithombe Our Lady of amakholwa ikholera nokulahlekelwa ephelele umbono. Usuku igama yesithombe eziyisimangaliso Virgin lugujwa 16 noma 29 Septhemba.
Lolu phawu kungcono kunanoma ikuphi omunye ongavikela ngokumelene okubi iso, umonakalo, imicabango emibi odlulayo abantu. Lolu phawu esithathwayo ukubeka ekhoneni kwesokunxele ihholo, ukuthi umuntu ngamunye odlulayo endlini angabonwa shazi. Umona futhi ukuqalekisa lokhu isithonjana azizwa ukudlula noma iyiphi enye, ngoba lapho kukhona lesi sithombe, abantu nomona awukwazi ukuphila. Kuhle indawo ukuze uthole izithonjana ezinjalo - okuphambene umnyango nomnyango.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Quick Mawuzwe"
Ngaphambi ngale ndlela ukuthandaza amatilosi yaphihlizeka umkhumbi, naphambi yokuba yimpumputhe, ubuthakathaka umlenze, ubuthulu, izinkinga izandla, kanye labo yezimo abhekene baba abathunjwa zamaphekula. Gubha usuku nokudunyiswa kwezithombe 9 noma 22 Novemba.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "ULizwi waba yinyama"
Lokhu Khulekani Isithonjana esolwa ukucindezeleka fetus bazalwe uhambe kahle ingane yazalwa enempilo. Qamba Day isithonjana inothi 9 futhi 22 Mashi.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "enguMkhululi ukugwiliza"
Lolu phawu, nithandazela nalabo abasebenzela nasemikhakheni ezihlobene emanzini. Igama Day isithonjana amaKristu obu-Orthodox ukugubha 20 noma ngo-December 2.
Isithonjana "Sporitelnitsa isinkwa"
Lolu phawu samukelwa bezothandazela ngenxa ukususa nesomiso, isifo nendlala jikelele. Igama usuku izithombe ongcwele ibhalwe 15 28 Okthoba.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "yisiboniso Yizoni"
Lokhu kuphakamisa le ugqozi isithonjana yathandazela lapho esibi udabuke, usizi nokungakwazi ukuzisiza. Kuyinto futhi isikhathi sokuthandaza, lokhu isithonjana uzobe isimo sengqondo bezikhohlisa. Qamba usuku izithonjana lodumo 7 no-20 Mashi.
isithonjana "Good" of UnguNina KaNkulunkulu
Lolu phawu anganika umlingo wokususa ikholera, izinkinga umbono, ukuba buthakathaka kwezicubu, ukuze azivikele okwakuseduze "umlilo omkhulu". Igama Day lugujwa mhla zingama-13 kanye 26 Agasti.
"Tikhvin" isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
Lokhu kukhulekela isithonjana ukuphilisa izimpumputhe futhi unedemoni, e yisithuthwane ngokulandelana kwawo, nobuthakathaka izicubu ephulukisa izingane ezincane, nokukhubazeka we ephansi kanye engenhla emikhawulweni. Futhi sithandazele ukuba isithonjana kungaba ngokuhlasela njengabafokazi. Igubha lokuzalwa lokhu isithonjana 26 no-9 Juni.
LaseTheotokos ka Tolga
Ngale ndlela amakholwa athembekile ukuthandaza ukuqeda isomiso ukuqalekela ukukhubazeka, kuhlanganise ukungakholelwa kuNkulunkulu. usuku Memorial lugujwa 8 no-21 Agasti.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Injabulo amathathu"
Lokhu Khulekani isithonjana ukubuya izinto alahlekile noma ebiwe, KUSEKELA ngamabomu abangenacala ukhululeka ukuthunjwa nezithunjwa. Gubha usuku izithonjana 26 noma u-8 Disemba.
Isithonjana Blessed Virgin "Nesisa"
Lolu phawu fanele eSt uSeraphim of Sarov futhi kunika abantu nezibi impumuzo ngokushesha ukuhlupheka angaqinisa ngayo ukholo lwawo eNkosini. Igama usuku Kulokhu iconography ibhalwe 28 no-10, no-19 futhi ngo-July 1.
Isithonjana uNina kaNkulunkulu "Soothe kwemihelo Kwami"
Lolu phawu sithandaze ngendlela ukwehlisa izinga lokushisa izinkanuko zesono, kanjani ukuba baphule uchungechunge eziluthayo. imifanekiso Ekhumbulekayo amakholwa Orthodox ukugubha usuku 25 kanye nezingu-7 Januwari.
Lokhu isithonjana enomlando omude ikhona iyinto enkulu phakathi kwamakholwa ngoba imindeni ijabule futhi evikela impilo izingane ezincane. Phezu kwakho konke, lokhu isithonjana kungasiza zabasebenzi ziningi futhi zaba nzima. Egcinwe lesi sithombe the Virgin e Cathedral of the Epiphany e Kostroma, futhi uvele 1613 futhi kwaba anawo Tsar Mikhail Fedorovich States Russian ngesikhathi.
Isithonjana laseTheotokos, "The Healer"
Lolu phawu liyazikhulumela. Ngokuvamile kuye usizo uswidi amaKristu agula kakhulu. Usuku lokuzalwa isithonjana kumaka 18 noma 1 Septhemba.
Chernigov Isithonjana UnguNina KaNkulunkulu
Lolu phawu ukuza ukuthandaza abakhwelwe ngamademoni, kanye abantu abayizimpumputhe noma kabi ababonayo. Igama Day lugujwa 1 no-14 Septhemba.
UNina kaNkulunkulu "Three Hands" isithonjana
Lolu phawu kalula ukuphulukisa isifo izandla nezinyawo, kanye ukuhlupheka okukhulu kwengqondo nokungokomoya. Usuku lokuzalwa celebration imifanekiso - 28 noma 11 Juni.
Ngenhla siyishiyele izithonjana ohlonishwayo kakhulu uNina kaNkulunkulu. Izithombe amagama kuzosiza ngokushesha ukuthola isithombe esithile futhi uthole ukubaluleka kwayo.
Isithonjana "Holy Trinity"
Le nguqulo edume kakhulu umfanekiso isithonjana "zintathu Ongcwele" u ngesineke yi master abadumile yobuciko iconographic Andrei Rublev. Kukhona izithombe ngesineke yi-proxy ezingengaphansi abadumile master abadwebi. Isithonjana ikhombisa ubuso bamalungu kaZiqu-zintathu (uYise, iNdodana, uMoya oNgcwele), indiza emkhathini. Lolu phawu liyadingeka abe khona kuwo wonke ekhaya, ngoba isenzo salo jikelele. Okwamanje, ikhophi main kuyinto ngaphakathi kwezindonga zintathu Church of emzini Kaluga.
Futhi ahlonishwe eSontweni Lobu-Orthodox kanye nezinye imifanekiso ongcwele. Igama lazo futhi ukubaluleka Yiqiniso, kudingeka wazi.
igama isithonjana St Pantileymona
Umfanekiso Martyr liyaziwa ngokuyisimangaliso ukuphulukiswa impahla yayo. Besonto ukubeka amakhandlela eceleni kwaleli isithonjana futhi Sicela ukuphiliswa, uthole umusa wangempela uJehova. Okwamanje, i-Ngokwesibonelo ebaluleke kakhulu imifanekiso Pantileymona yethempeli Ioana Predtechi.
ONgcwele Ubusisiwe Matrona Moskovskaya
Lokhu saint ingenye ohlonishwayo kakhulu emhlabeni wenkolo. Isigodlo enkulu, lapho amandla akhe enhlokodolobha yezwe lethu, emgwaqweni omkhulu Tagansky namuhla. Esigodlweni, lapho izinsalela Matrona kuyinto besifazane ikakhulukazi. Nsuku zonke, izixuku zamakholwa ukuza Isigodlo ukuze i-oda ukufinyelela Matrona nge emthandazweni ukuba asisize noma ukubonga. Eduze eMoscow, okungukuthi Kaluga Ubuye isithonjana Matrona, futhi itholakala nabafazi ithempeli - Gordhan.
UPetru No Fevronia
Esontweni elilodwa kuyinto isithonjana iSt Peter futhi Fevronia ngazimbili ukuthi atholakala usizo uthando nokuphila komkhaya.
Ngeshwa, zonke Orthodox imifanekiso, izithombe kanye namagama kubo ayikho indlela ukuchaza kwelinye sihloko, ngenxa okuyinto kukhona abaningi kakhulu. Noma kunjalo, kwakhiwa indlu enkulu yesonto main wakwazi angcwelise.
Qamba usuku wamaRoma. Usuku lokuzalwa ikhalenda Orthodox
Qudsi hadith nokubaluleka kwazo Islam
Yini Ukuze Bheka e Yalta: incazelo, umlando, ezindaweni ezithakazelisayo kanye nokubuyekeza
Isipho esihle kakhulu ku-Febhuwari 23. Isipho ngo-February 23 umyeni
Bhala Film Tinto Brass kanye Biography of the umqondisi
Uyini cous cous, nokuthi ungakwazi ukupheka nalo